Kabtan Jack Grealish oo ugu dambeyn ka hadlay Wararka la xiriirinaya Kooxda Manchester United – Gool FM
Haaruun July 22, 2020
(Manchester) 22 Luulyo 2020. Kabtanka Kooxda Aston Villa ee Jack Grealish ayaa si rasmi ah u qirtay in uusan hubin mustaqablkiisa iyo halka uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka soo socda, xilli ay sii kordhayaan wararka la xiriirinaya Kooxda Manchester United.
Kooxda Aston Villa ayaa xalay soo nooleysay rajadeeda ay ku sii joogi karto horyaalka Premier League kaddib markii ay 1-0 ku dardareen Arsenal oo ay ku soo dhoweeyeen Villa Park, waxaana ay guushaas kaga soo baxday boosaska hoose ee loogu laabto heerka labaad.
Yeelkeede, Villa waxa ay u baahan tahay in kulanka soo socda ay badiyaan ama kooxda Watford oo ay isku dhibco yihiin ee ay xalay ka sare mareen laga adkaado.
24-sano jirkaan Jack Grealish oo ka mid ah xiddigaha diiradda u saaran kooxda Manchester United ayaa warbaahinta la hadlay kaddib guushii ay kooxdiisu xalay ka gaartay Gunners, waxaana uu ka hadlay mustaqbalkiisa.
Grealish waxa uu sheegay in kaliya uu haataan ka fikirayo sidii uu kooxdiisa Aston Villa uga badbaadin lahaa inay u laabato horyaalka heerka labaad, isla markaana uu go’aan ka gaari doono mustaqbalkiisa marka uu soo dhammaado xilli ciyaareedka.
Kaddib markii la weydiiyey kabtan Grealish haddii uu kal ciyaareedka dambe sii xirnaan doono Maaliyadda Aston Villa waxa uu ku wajaab celiyey: “Ma hubo wakhtigaan, kaliya hal ujeeddo ayaa leeyahay, waana inaan kooxdan ku ilaaliyo Premier League, waxaana rajaynayaa inaan Axadda sameyn doono”.
Aston Villa ayaa Axadda la ciyaari doonta kooxda West Ham oo dhankeeda aan xaalad wanaagsan ku jirin kulankaas ayeyna kaga badbaadi karaan inay u laabtaan heerka labaad ee Ingiriiska.
Xiddig Kooxda Real Madrid kula guuleystay horyaalka La Liga oo Guri ka iibsaday Magaalada London